Zimbabwe ruling party says Mugabe goes or impeachment starts – Morian Press
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe’s ruling party Central Committee fired longtime President Robert Mugabe as party leader Sunday, saying if he doesn’t resign as the country’s leader by noon Monday it will begin impeachment proceedings when Parliament resumes the following day. Clinging to his now virtually powerless post, Mugabe discussed his expected exit with the army commander who put him under house arrest days ago, in a second round of negotiations. But the world’s oldest head of state was increasingly isolated in his lavish mansion, with allies departing, arrested or, like his wife, now expelled from the ruling party.
Zimbabwean President, Robert Mugabe, meets with Defence Forces Generals in Harare at State House , Sunday, Nov, 19, 2017. Members of the ZANU PF Central committee fired Mugabe as chief and replaced him with dismissed deputy President, Emmerson Mnangagwa on Sunday. (AP Photo)
An old torn election sticker, with a portrait of Zimbabwean President Robert Mugabe, on a building in Harare Sunday, Nov. 19 2017. Zimbabwe’s ruling party Central Committee begun removing Mugabe as party leader and replacing him with recently fired Vice President, Emmerson Mnangagwa. (AP Photo)
Pedestrians check their mobiles as they walk past a newspaper stand on a street in downtown Harare, Zimbabwe Sunday, Nov. 19, 2017. Zimbabwe’s ruling party Central Committee says longtime President Robert Mugabe must resign as president by noon Monday or impeachment proceedings will start. (AP Photo/Ben Curtis)
Members of the Zanu pf Central committee react after the ruling party fired Zimbabwe’s President Robert Mugabe as party chief, in Harare, Sunday, Nov. 19, 2017. Zimbabwe’s ruling party Central Committee fired longtime President Robert Mugabe as party leader Sunday, saying that if he doesn’t resign as the country’s president by noon Monday they will begin impeachment proceedings when Parliament resumes the following day. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Graffiti in support of the ruling ZANU PF party on a building in Harare Sunday, Nov. 19 2017. Zimbabwe’s ruling party Central Committee begun removing President Robert Mugabe as party leader and replacing him with recently fired Vice President, Emmerson Mnangagwa. (AP Photo)
Members of the Zanu pf Central committee react after the ruling party fired Zimbabwe’s President Robert Mugabe as party chief, in Harare, Sunday Nov, 19, 2017. Zimbabwe’s ruling party Central Committee fired longtime President Robert Mugabe as party leader Sunday, saying that if he doesn’t resign as the country’s president by noon Monday they will begin impeachment proceedings when Parliament resumes the following day. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
FILE – In this Aug. 30 2017 file photo, Zimbabwean Deputy President, Emmerson Mnangagwa, greets party supporters at a ZANU-PF rally in Gweru, Zimbabwe. A Zimbabwe ruling party official confirmed Sunday, Nov. 19, 2017 that the Central Committee has fired President Robert Mugabe as party leader and replaced him with Mnangagwa. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
People walk past a partly torn down ruling party banner that showed Zimbabwe President Robert Mugabe’s face at the Zanu pf headquarters in Harare, Zimbabwe Sunday Nov. 19, 2017. Clinging to his now virtually powerless post, longtime President Mugabe on Sunday was set to discuss his expected exit with the army commander who put him under house arrest, while the ruling party prepared to recall the world’s oldest head of state as its leader. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Pedestrians walk past a newspaper stand on a street in downtown Harare, Zimbabwe Sunday, Nov. 19, 2017. Zimbabwe’s ruling party Central Committee says longtime President Robert Mugabe must resign as president by noon Monday or impeachment proceedings will start. (AP Photo/Ben Curtis)
An old ripped election banner bearing a portrait of President Robert Mugabe outside the headquarters of the ruling ZANU PF building in Harare Sunday, Nov. 19, 2017. Zimbabwe’s ruling party Central Committee begun removing President Robert Mugabe as party leader and replacing him with recently fired Vice President, Emmerson Mnangagwa. (AP Photo)
FILE – In this Friday Nov. 17, 2017 file photo, Zimbabwean President Robert Mugabe attends a graduation ceremony on the outskirts of Harare. A Zimbabwe ruling party official confirmed Sunday, Nov. 19 2017 that the Central Committee has fired Mugabe as party leader and replaced him with the recently dismissed Vice President, Emmerson Mnangagwa. (AP Photo/Ben Curtis, File)
FILE – In this Friday Nov. 17, 2017 file photo, Zimbabwean President Robert Mugabe attends a graduation ceremony on the outskirts of Harare. A Zimbabwe ruling party official confirmed Sunday, Nov. 19, 2017 that the Central Committee has fired Mugabe as party leader and replaced him with the recently dismissed Vice President, Emmerson Mnangagwa. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
Members of the ZANU PF Central Committee stand during a meeting at the party headquarters in Harare, Sunday Nov, 19, 2017. A day after huge crowds rallied peacefully in the capital, Harare, for the 93 year old Mugabe to go, the ruling party’s Central Committee is meeting on demands by provincial branches to recall President Robert Mugabe as party leader. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A portrait of Zimbabwean President, Robert Mugabe, hangs at the ZANU PF party headquarters in Harare, Sunday Nov, 19, 2017. A day after huge crowds rallied peacefully in the capital, Harare, for the 93 year old Mugabe to go, the ruling party’s Central Committee is meeting on demands by provincial branches to recall President Robert Mugabe as party leader. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A bus belonging to the Zanu pf party is parked outside the party headquarters in Harare, Zimbabwe Sunday, Nov. 19, 2017. Clinging to his now virtually powerless post, longtime Zimbabwe President Robert Mugabe on Sunday was set to discuss his expected exit with the army commander who put him under house arrest, while the ruling party prepared to recall the world’s oldest head of state as its leader. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Members of the ZANU PF Central Committee attend a meeting at the party headquarters in Harare, Sunday Nov, 19, 2017. A day after huge crowds rallied peacefully in the capital, Harare, for the 93 year old Mugabe to go, the ruling party’s Central Committee is meeting on demands by provincial branches to recall President Robert Mugabe as party leader. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Protesters demanding President Robert Mugabe stand down ride in the back of a car with a placard “Rest in peace Mugabe” as they drive towards State House in Harare, Zimbabwe Saturday, Nov. 18, 2017. In a euphoric gathering that just days ago would have drawn a police crackdown, crowds marched through Zimbabwe’s capital on Saturday to demand the departure of President Robert Mugabe, one of Africa’s last remaining liberation leaders, after nearly four decades in power. (AP Photo/Ben Curtis)
Zimbabwean soldiers bump fists with joyful protesters thanking them near Zimbabwe Grounds in Harare, Zimbabwe Saturday, Nov. 18, 2017. Opponents of Mugabe are demonstrating for the ouster of the 93-year-old leader who is virtually powerless and deserted by most of his allies. Writing in Shona on poster refers to Mugabe in a respectful way saying “Go and rest now”. (AP Photo/Ben Curtis)